Arahaba ry Mpifankatia tratry ny 14 febroary ! | Ny androaniko
[Ankapobeny ] 14 Febroary, 2007 01:56
Arahaba ry Mpifankatia tratry ny 14 febroary !
14 février - SAINT VALENTIN
Ny andron’ny 14 febroary dia natokan’ny Eglizy Katolika Romana hankalazana ny andro nanaovana maritiora an’ Md Valentin, satria mbola nafana ny fanenjehena ireo kristiana tamin’ny andron’ny Mpanjaka lehibe Claudio II tamin’ny tapatapaky ny taonjato fahatelo.
Valentin d’Interamna (Terni ankehitriny, tanàna ao Italy tokony ho 100km avy ao Roma) dia eveka maty martiora noho ny nanamasinany ny fanambadian’ny tovovavy kristiana iray tamina lejionera romana izay voarara tokoa tamin’izany fotoana izany.
Ankoatra io dia nisy tantara iray koa milaza fa i Valentin dia namitrana ny fifankatiavan’ny tanora roa nifamaly tena an-dàlana, ka raha sendra nifanena tamin’izy ireo izy dia nanolotra vonindraozy ho tazoniny miaraka ka niombona tamin’izay izy roa.
Ity olomasina ity dia milevina ao Terni, ao amin’ny Basilika mitondra ny anarany. Voatahiry anaty vata izy ary eo anilan’io dia misy sary vongana volafotsy misy soratra hoe : Md Valentin mpiaro ny fitiavana (San Valentino patrono dell’amore).
Ho anareo mpifamofo izay te-hankalaza ny fanambadianareo ao amin’io Basilika io dia voaasa manokana isan-taona handray anjara amin’ny foara sy fety ben’ny Mpifankatia ao amin’io tanàna io mandritra ny volana febroary manontolo.
Ary ireo izay an-dalana ny hankalaza jaobily na volafotsy na volamena kosa dia misy Sorona Masina manokana ho azy ireo ka hanomezana azy ireo fahatsiarovana toy ny pergamena sy voninkazo ho an’ny andriambavilanitra.
Ka atsipy ny teny ho ren’ny manan-tsofina…
Ary dia mirary fety sambatra ho an’ny Mpifankatia rehetra.
3 Hevitra | "Arahaba ry Mpifankatia tratry ny 14 febroary !"